ဂ = ဂိမ်း ကစားခြင်းကိုမှ ချစ်သလား… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဂ = ဂိမ်း ကစားခြင်းကိုမှ ချစ်သလား…
ဂ = ဂိမ်း ကစားခြင်းကိုမှ ချစ်သလား…
Posted by alinsett on Aug 10, 2012 in Arts & Humanities, Creative Writing, Myanmar Gazette | 15 comments
အခုဆို ဂ ငယ်ဆီကို ရောက်လာပါပြီ။
ဂငယ်နဲ့ပက်သက်တာလေး… ရေးမယ် ဆိုတော့ ဂဃနဏ မသိပဲ.. ၀င် ၀င်ပြောတတ်သူတွေ အကြောင်း..
ရေးရင် ကောင်းမလား…ပေါ့ ။စဉ်းစားတယ် ။
ဒါပေမယ့် မိမိ ကို မိမိ တိုက်ခိုက် ပုတ်ခတ်တာတွေ မရေးချင်တာကြောင့်….. အဲဒီ ခေါင်းစဉ်ကို…လက်ရှောင်လိုက်ရပါတယ် ။
ကျွန်တော့်အတွေးထဲကို…. ဂိမ်း ကစားခြင်းမှာ… တပ် ငြိ နေတဲ့လူငယ် တွေ အကြောင်း..၀င်လာတော့လည်း……
ဂိမ်း ကစားခြင်းကိုမှ ချစ်သလား…… လို့ …
လူငယ်တော်တော်များများက ဂိမ်းဆိုင် တွေထဲ… ကို မှ ၀င်ထွက်ချင်လာတဲ့ အခါ….. ကျွန်တော်..တွေးမိပါတယ် ။
ဂိမ်း ကစားတာ..ဘာအကျိုးရှိသလဲ..လို့။ အခုဆိုရင် အင်တာနက် ဂိမ်း..တွေက ခေတ်ကောင်းလာတော့ အင်တာနက်ဆိုင်ထဲမှာ…
ဗဟုသုတ ရှာချင်တဲ့ လူငယ်က နည်းပြီး..ဂိမ်း ကစားသူက များနေပါပြီ။
တချို့ဂိမ်းတွေက ဥာဏ်ရည်နဲ့ယှဉ်ပြီး..ကစားရာတာ ဆိုတော့…
ဦးနှောက်ကို အလုပ် ပိုလုပ်ခိုင်း နိုင်လို့ ….. ကောင်းတာပေါ့ နော် ။
ဖြတ်ထိုးဥာဏ်… နဲ့လျင်လျင်မြန်မြန်..ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း..တွေ.. တိုးတက် လာမယ်..။
ပြီးတော့ အရှုံးကို..ခံစားတတ်သွားမယ် ။ အနိုင်ရခြင်းကို… ကျေနပ် တတ်လာမယ် ။
မဆိုးပါဘူး ။ ဒါဖြင့်…
လူငယ်တစ်ယောက်ကို တစ်သက်လုံး..ဂိမ်းကစားခြင်းနဲ့မ ကင်းကွာစေနဲ့။ အဲဒီ လူငယ် နောင်တစ်ချိန်မှာ..ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲ.။
ဒါ..မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းလား… ။ ဂိမ်းကစားခြင်း ကို စွဲ စွဲလမ်းလမ်း… ပြုမူခဲ့သူ ဘယ်သူတွေ… သိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်လာဖူးသလဲ. ။
ဘယ်သူတွေ… ဂိမ်းကစားလို့ချမ်းသာဖူးသလဲ. ။
ဂိမ်း ကစားလို့ …လူဖြစ်ကျိုး.နပ်ဖူးသလဲ. ။
အဲဒါ..အဆိုးဆူံး အချက်ပါ ။
ဂိမ်းကစားခြင်းထဲမှာသာ…နစ်ဝင် တွယ်တာနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဟာ…
အခြားအရာတွေအ တွက် တီထွင်ကြံဆ ဖို့ …. အချိန် နည်းသွားမယ် ။
လောက ကို အပေါ်စီးကနေ စိုးမိုး လျွှမ်းခြုံပြီး..မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ့် ကလေးငယ်ဟာ….
အသိပညာ ကြွယ်ဝဖို့ …. စာအုပ်တွေ …. ဖတ်ရမယ် ။ ရေဒီယိုက လာတဲ့ သတင်းတွေ ကို နားထောင်ရမယ် ။
ပြီးတော့…….. အချို့ သော ပညာရပ်တွေကို…. သင်ယူရမယ် ။
ပညာက ကိုယ့် အနားကို မလာရင်တောင် ပညာဆီကို..
ကိုယ် က မရောက်ရောက်အောင် သွားနိုင်ရမယ် ။ အဲဒီ အတွက် အချိန်တွေ..ပုံအော ပေးရမယ့် ကလေးငယ်ဟာ….
ဂိမ်း ကစားခြင်းထဲမှာသာ…. နစ်ဝင်သွားတဲ့ အခါ…………..
ဂိမ်း ဆော့တာနဲ့စာဖတ်တာ..ဘယ်ဟာ..ပိုကောင်းသလဲ..လို့ မေးလာရင်….
ဘယ်သူမဆို………စာဖတ်တာက ပိုကောင်းတာပေါ့..လို့ဖြေမှာပါ ။ ဟုတ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ကောင့်တဲ့ စာ…တွေ ဖတ်မှ ပါ ။ ဗဟုသုတ ရမယ့် စာတွေ..ဖတ်နိုင်မှ ဖြစ်မှာပါ ။
ကလေးတွေ..စာဖတ်ချင်လာအောင်…. လုပ်ရမယ်.. ။
ကဲ..ဒါဖြင့်….. ရပ်ကွက်တွေ.. ၊ မြို နယ်တွေမှာ…. စာအုပ်တွေ .ပေါပေါများများ..ဖတ်နိုင်မယ့်…
စာကြည့် တိုက်တွေ.. လိုနေပြီ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ… စာကြ ည့်တိုက်တွေ…တော်တော်များပါတယ် ။
( သတင်းစာ ထဲက သတင်းတွေ အရ…..ဆိုရင်ပေါ့လေ.. ။ တော်တော်များပါတယ် ။ )
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့… စာကြည့်တိုက်က………. ဆိုင်းဘုတ်ပဲ.ရှိပါတယ် ။
စာအုပ် မရှိပါဘူး။ တစ်အုပ်မှ မရှိပါဘူး။
တချို့စာကြည့်တိုက်တွေမှာ….. စာအုပ်တွေ ရှိတယ်..ဆိုပါဦးတော့…. ။
ဘာ စာအုပ်တွေ ..ရှိသလဲ…။ ဘယလောက် ရှိသလဲ…..
ရှိတဲ့ စာကြညိ့် တိုက် ဟာ… အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်က ကလေးငယ်တွေ../ လူငယ်တွေကို…. ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေ သုံးပြီး..ဆွဲဆောင်နိုင်မလဲ….။
ဂိမ်း ကစားခြင်း ထက် ပို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပိုပြီး..အကျိုးရှိစေမယ့် …. စာဖတ်ခြင်းဆီ..ဆိုက်ဆိုက် မြိုက်မြိုက်ေ၇ာက်လာဖို့ ….ဆိုတာ…
လူငယ်တွေ..စိတ်ဝင်စားလာအောင်..ဆွဲဆောင်နိုင်မှ ဖြစ်မှာပါ ။
ဆွဲဆောင်မှုတွေ…..များပြားလာတဲ့ …. ဒီ ခေတ်မှာ…. စာကြည့်တိုက် တွေ လည်း..ဆွဲဆောင်မှုရှိမှ ဖြစ်တော့မှာလေ…။ ဆွဲဆောင်မှု…..လိုပါတယ် ။
စာကြည်တိုက် နည်းပါးတဲ့ ပြဿနာ….
စာအုပ် ရှားပါးတဲ့ ပြဿနာ…….
စာအုပ်ကို ချစ်လာအောင်…. ဆွဲဆောင်ရမယ့်နည်းလမ်း ပြဿနာ……
လူငယ်တွေ ဂိမ်းကစားခြင်း ထဲက ရုန်းထွက်ပြီး……
စာဖတ်ခြင်းထဲ…… ရောက်လာမှာပါ ။
ကျွန်တော်..တို့ … ဘာလုပ်ကြမလဲ…။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က…. ဘာလုပ်ပေးရမှန်း..မသိတော့ လို့ ပါ ။
( ကျွန်တော် ဟာ…. ကြက်ဖ တစ်ကောင်လို ဖြစ်နေပါပြီ။ သူများတွေကို.. အိပ်ရာက နိုးအောင်.. အောက်အီးအီးအွတ်….လို့ ..အော်ဟစ် နှိုးနေပေမယ့်..
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့…. အိပ်တန်းပေါ်က မဆင်းချင်သေးတဲ့ ကြက်ဖကြီးလိုပါပဲ..။ )
တွန်..ပြီ…. နှိုးခွင့်လေး…ရှိနေသေးတာ ကို ပဲ…….
( လောလောဆယ်..) ကျေနပ်ရပါတယ် ။ ကဲ..မေးကြည့်ပါဦးမယ် …။
ကျွန်တော့် ရဲ့ ကြက်ဖ ဥပမာ က နည်းနည်းရိုင်းသလို ဖြစ်သွားရင်တော့..အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဥ ပမာ..အဖြစ်သာ..ဖတ်ရှု.ကြစေလိုပါတယ် ။
ရိုးရိုးလေး..ပဲ.. ချရေးဖြစ်တာပါ ။
ကျွန်တော်လည်း…မနေနိုင်တော့လို့ ..ထ ..ပြောကြည်တာ ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဂိမ်းကစားတာမျိုး.မရှိတော့….. ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုး.ဘယ်ဟာ ပိုများသလဲ
ဒါကြောင့်..ကျွန်တော်.. အစပျိုးလိုက်တဲ့ ဒီ ပို့စ်မှာ ၀ိုင်းဝန်းပြီး.. ဆွေးနွေးပေးကြပါခဗျာ.။
မျက်လုံးထိခိုက်တယ်။ အချိန်ကုန်မှန်းမသိနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်ထားတော့ ငွေကုန်တယ်။
အချိန်ကုန်တယ်။ P chogyi ပြောသလိုအာရုံကြောထိခိုက်ပြီးဂိမယ်။
ခေတ်ကာလသဘောအရ သိသင့်ပေမယ့် စွဲလမ်းမနေသင့်ပါဘူး။
ဒီမေးခွန်းအတွက်တော့ နည်းနည်းပြောမယ်။ ဂိမ်းကစားလို့ ချမ်းသာထက်ပိုက်ဆံရပြီး နာမည်ကြီးကျတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမကြည့်နဲ့ ဦး ပြည်တွင်းမှာတင် ဂိမ်း တွေကစားရာကနေ ကိုယ်တိုင် ဂိမ်းထွင်ပြီး နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုရောင်းချလို့ ပိုက်ဆံရသွားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။နောက် ပြီးတော့ Dota လိုအဖွဲလိုက် ကစားရတိုက် ပြိုင်ပွဲတွေ ၀င်ပြိုင်ရင်းနဲ့လည်း ပိုက်ဆံတွေရှာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းရဲ့ ညီဆိုရင် အဲဒီဂိမ်းနဲ့ ပဲ မိဘကို ရှာကျွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုဂိမ်းတွေကို ကမ္ဘာဖလားလို ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀င်ကစားလို့ နာမည်ကျော်နေတဲ့လူတွေ အများကြီးပါပဲ.။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က ဂိမ်း ကစားလို့ လူဖြစ်ကျိုးနပ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီး ရှိတယ် ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ ဂိမ်း နဲ့ ရင်းပြီး ပိုက်ဆံတွေအများကြီး ရှာဖွေသွားတဲ့ လူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်စိတ်ထင် လူငယ်တွေ အရက်ဆိုင်တို့။ KTV တို့။ အနိုပ်ခန်းတို့ သွားတာထက်စာရင် ဂိမ်းဆိုင်မှာ ဂိမ်းဆော့နေတာ ပိုကောင်းပါဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို အလွန်အကျွံဆိုရင် တော့ မကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒီတော့ ဂိမ်းကိုလည်း မအိပ်မစား ကစားနေရင်တော့ မကောင်းဘူပေါ့ဗျာ။
တိုးလေးကတော့ ဂိမ်းကစားတာကို လုံးဝအားမပေးပါဘူး။
မောင်ဝမ်းကွဲလေးတွေ ရှိပါတယ် တယောက်က ဆေးကျောင်း ဒုတိယနှစ်ကို မဖြေရတာ ၂ နှစ်ရှိပါပြိံ။တယောက်က ကွန်ပြူတာတက်နေတာပါ သူလဲမနှစ်က. ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်လို့ မဖြေရပါဘူး။ သူတို့ ၂ယောက်လုံးက ဂိမ်းပဲတချိန်လုံးဆော့နေကြတာပါ။KTV တို့ အနှိပ်ခန်းတို့ မသွားပေမယ့် ကျောင်းမတက်ဘဲ ဂိမ်းဆော့နေတာတော့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ.. ဂိမ်း ကစားလို့ …လူဖြစ်ကျိုး.နပ်ဖူးသလဲ. ။
Counter Strike ပေါ်ခါစမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Fatal1ty, SK တို့… အခုခေတ် World`s best Dota Clan Navi (Natus Vincere) တို့ကို မကြားဘူးသေးထင်တယ်…
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မသိဘူး… နိုင်ငံခြားမှာတော့ နာမည်ကြီး Game Clan အဖွဲ့တွေက ပြိုင်ပွဲဆုကြေးထက် Sponsor ကြေး Advertisement ကြေးနဲ့ ရပ်တည်နေကြတာပါ… ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် Creative က ထုတ်တဲ့ Fatal1ty Gaming Mouse, Sound Blaster card & Headphone ဆိုရင် သူတို့ Creative Product မှာ Fatal1ty နာမည်ပါထဲ့ထုတ်ရတဲ့ အထိတောင် အောင်မြင်ခဲ့တာပါ
နောက်တစ်ခုက Game Company တွေက သူတို့ Game တွေ မထုတ်ခင် Professional Gamers တွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ အစမ်းဆော့ခိုင်းပါတယ်… Bugs တွေကို ရှာတဲ့အနေနဲ့ပါ
၂၀၁၁ မှာ Dota2 ကို BetaVersion ကြော်ငြာအနေနွဲှ့World Best Dota Clans တွေကို စုပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်… ပထမဆုက USD 1 Million ပါ… ထုံးစံအတိုင်း Navi ကပဲ ရသွားပါတယ်… တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်… ကြည့်တဲ့လူ ဘယ်လောက်များလဲဆိုရင် ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်ဝင်ဝင် Server Full ကြီးပဲပြနေတာပါ
အခုခေတ်မှာ Game ပြိုင်ပွဲတွေဟာ အားကစားတစ်ခုလို လက်ခံနေကြပါပြီ… E-Sport လို့တောင် တင်စားလာကြပြီ… နှစ်စဉ် E-Sport World Cup လုပ်ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲတွေ လုပ်လာတာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ… ၂၀၀၉ (သေချာမမှတ်မိပါ) တုန်းက S.Korea ကောင်လေးတစ်ယောက် WarCraft3World Cup မှာ ပထမရသွားပါတယ်… Live Announcer Korean အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးဆိုရင် ၀မ်းသာလွန်းလို့ ပြောရင်း ပြောရင်း မျက်ရည်တွေကြလာတာ… Youtube မှာ ရှိပါတယ်… ရှာကြည့်ပါ… Gamer တွေဟာ နိုင်ငံတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ အထိကို ဖြစ်လာကြပါပြီ
သေချာတာကတော့ ကျွန်တော် နောက် ၁၀ နှစ် အလုပ်လုပ်ရင်တောင် သူတို့ ၁ နှစ်ဝင်ငွေကို မယှဉ်နိုင်သေးပါဘူးဗျာ… မြန်မာနိုင်ငံလို အစစအရာရာ နောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာတော့ ဂိမ်းဆော့လို့ သူဌေးမဖြစ်ပေမယ့် သူများနိုင်ငံမှာတော့ ဂိမ်းဆော့ချင်းဟာ Professional အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ ရာစုနှစ် တစ်ခုရှိခဲ့ပါပြီ
Youtube ကနေ သူတို့ဆော့ထားတာတွေကို အရင်ကြည့်လိုက်ပါဦး… သူတို့လို ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်… ကိုယ့်မှာလည်း အရည်အချင်းရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရင် SG or Malaysia ကိုအရင်ထွက်… Game Center တွေမှာ အရင်Challenge လုပ်ကြည့်ပါ
ဂိမ်းကစားပြီးတော့ ချမ်းသာချင်တဲ့ လူဖြစ်ကျိုးနပ်ချင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ ဒီနည်းပဲရှိတယ်လို့ထင်တာပဲ
၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး.ကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
မိတ်ဆွေကြီး..R Ga.. ပြောတဲ့ သူတွေလို…ပေါက်မြောက် အောင်မြင် သွားကြရင်တော့…ကောင်းတာပေါ့နော် ။
ဒါပေမယ့် ဂိမ်းကစား တာကို အမှီပြု..ပြီး… လူဖြစ်ကျိုးနပ်သွားသူတွေ..ရှိတယ်.ဆိုတာကိုတော့..ကျွန်တော်
သိပ် ဘ၀င်မကျဘူးဗျ ။ လူဖြစ်ကျိုး နပ်တယ်..မနပ်ဘူး.ဆိုတာကို အဓိပ္မာယ် ဖွင့်ပုံ ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တူမယ် မထင်လို့ ……. ဒီ အပိုင်းကိုတော့ ဆက်မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး
ကျွန်တော်ကတော့… ဂိမ်းကစားပွဲတွေ.မှာ..အနိုင်တွေ..ဆက် ဆက် ရပြီး.နာမည်တွေကြီး.. ပိုက်ဆံတွေရပြီး.
ချမ်းသာ ပြည့်စုံစွာ..နေထိုင် သွား ရရုံနဲ့ လူဖြစ်ကျိုးနပ် တယ်..လို့မယူဆပါဘူး။
လူ၇ယ်လို့ဖြစ်လာတာ..နဲ့လူဖြစ်ကျိုး.နပ် စွာ.နေထိုင် သွားဖို့ ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေကိုပြောရရင်.
ကျယ်ပြန့် ကုန်မှာ…။ ဆိုတော့.. လူဖြစ်ကျိုး နပ်ခြင်း မနပ်ခြင်း ကိစ္စ ကို..နောက်မှ ဆက် ဆွေးနွေး ကြပါစို့ ..။
K T V တို့အနှိပ်ခန်းတို့ …နဲ့ ဂိမ်း..ဆိုင်မှာ ထိုင်ဆော့နေတာနဲ့ ကို..ယှဉ်ထိုးပြ သွားတာ မဟုတ်ပါကြောင်း…
ဂိမ်းဆော့ခြင်းနှင့် စာဖတ်ခြင်း..( စာကြည့်တိုက် တွေ ကိစ္စ ) ကိုသာ..ယှဉ်ထိုးပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါကြောင်း…..
R Ga ပြောသလိုပါပဲ….
ချစ်တိုးလေး..ရေ..ကျွန်တော့် ညီ ၀မ်းကွဲတွေ.လည်း.ဒီလိုပါပဲ.။
ဦးပေ..ရေ. ကျေးဇူးပါပဲ.နော် ။ ကွန်မန့်း ဗျာတိုလေး.အတွက်…။
မရွှေကြည်ရေ… ဘ၀တူတွေပါ ။
အင်တာနက် သုံးနေရင်းနဲ့ ဟေးခနဲ…အားခနဲ..အော်သံတွေ…အကျယ်ကြီး ကြားကြားနေရတော့..
တော်တော်လေး စိတ်ပျက်မိပါတယ် ။ ရွှေကြည့်လိုပဲ.. အဲဒီလို ဆိုင်မျိုးကို ရှောင်နေမိပါတယ် ။
အနည်းအကျဉ်း.. ဟုတ်ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ..စိတ်အပန်းပြေစေဖို့ …ကလေးတွေကို နည်းနည်း ခွင့်ပြု သင့်တာပေါ့နော် ။ နည်းနည်းကနေ..များ မသွားဖို့ တော့..ဘေးက လူကြီးတွေ..တာဝန်….
အဆိုးနဲ့ အကောင်း…ဒွန်တွဲနေတတ်တာ က လောက. သဘာဝဆိုတာ.လေး..ဟုတ်တာပေါ့နော် ။
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ဂိမ်းကစားတာက ကျွန်မရဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုပါပဲ …. ။ အပမ်းဖြေခြင်းတစ်မျိုးလို့ ယူဆပြီး ဂိမ်းကစားခြင်းကို စွဲ စွဲလမ်းလမ်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ် … ။ Angry Birdတို့ ၊ Plants Vs Zombies တို့ဆို ……လယ်ဗယ် စ/ဆုံး ဆော့ပြီးလျှင်တောင် …. ကြယ်သုံးလုံး မရတဲ့ လယ်ဗယ်တွေပြန်ဆော့ဖြစ်တယ် …. ။ ဒိုတာဆိုလည်း ခုတ်လိုက်တာပါပဲ … ။ ဒါလည်း ရူးသွပ်ခြင်း တစ်မျိုးပါ … ။ ဂိမ်းဆော့လို့ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ ၊ အလုပ်ချိန်တွေ ၊ မိသားစု ဆက်ဆံရေး တွေ ဘာမှကို ထိခိုက်မှု မရှိသေးတာကြောင့် … အခုထိ … ဆော့နေတုန်းပါပဲ ။
ညဘက် ဂိမ်းကစားမိလျှင် မိုးလင်းသွားတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ် …. ။ တရေးနိုး ပြန်အိပ်မရလို့ ဂိမ်းကစားရင်း …. မိုးလင်းသွားခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ် ။ အလုပ်ထဲမှာလည်း respect ပေးရမယ့် လူတွေမရှိလျှင် မရှိသလို ဂိမ်းဆော့တာပါပဲ …… ။ ဂိမ်းကစား ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ဇက်ကြောတက်တာလောက်ပဲ ရှိပေမယ့် … ကောင်းကျိုး(ကိုယ့်အယူဆနဲ့ကိုယ်ခံယူထားတာ)တွေကတော့ … အချိန်ကိုက် လျှပ်တပြတ်စဉ်းစား လှုပ်ရှားတတ်လာတာရယ် ၊ ရတဲ့အချိန်ကို ထိရောက်စွာ သုံးတတ်လာတာရယ် … လူကactive ဖြစ်နေတာတွေရယ်ပါပဲ … ။
ဂိမ်းကစားတဲ့ လူ … ဘာမှမဖြစ်ချင်လည်း နေပါစေ …… ဂိမ်းဆော့နေတုန်း ..ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် … စိတ်အေးချမ်းနေလျှင်ကို ကျေနပ်ပြီ :mrgreen :
မအိတုံရေရွှေကြည်အတွက်တော့ ဆော့နေတုန်းသာ အက်တစ်နော်။
အဲဒါနဲ့ပဲ သိပ်မဆော့ဖြစ်တော့ဘူး။ တခါတလေတော့ဆော့ဖြစ်ပါတယ်။
မရွှေကြည်ရေ … ကျွန်မကို စိတ်ပူပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … ။
ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ လောလောဆယ် ဒုက္ခမရောက်သေးပေမယ့် … အိမ်က လူတွေက မျက်ကွင်းတွေ ညိုလာလိမ့်မယ် … ဇီးကွက်မျက်လုံးလို ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ခြောက်ထားတော့ ….. အရင်ကလောက်တော့ မဆော့ဖြစ်တော့ပါဘူး … ဒါပေမယ့်.. ဆော့တုန်း ပါပဲ …။
အလင်းဆက်ရေ… လူတစ်ကိုယ်စိတ်တမျိုးပေါ့လေ … ။ ကော့မန့်ပြန်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါနော် ။
အမြင်အယူအဆ လေးတွေ..ကို ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြလို့ ကျေးဇူးပါပဲ.နော် ။
( ကောင်းကျိုး(ကိုယ့်အယူဆနဲ့ကိုယ်ခံယူထားတာ)တွေကတော့ … အချိန်ကိုက် လျှပ်တပြတ်စဉ်းစား လှုပ်ရှားတတ်လာတာရယ် ၊ ရတဲ့အချိန်ကို ထိရောက်စွာ သုံးတတ်လာတာရယ် … လူကactive ဖြစ်နေတာတွေရယ်ပါပဲ … ) ကို..ရတယ်..
ဆိုးကျိဲုးအနေနဲ့ လည်း.သိပ်မသိသာ သေးဘူး…ဆိုရင်တော့ ကလေးတွေကို.. အတိုင်းအတာလေး တစ်ခုနဲ့ ပေး ကစားသင့်တာပေါ့နော် ။
ကျနော်ကတော့..စာသမား..မို့လားမသိဘူး ။ စာပဲ.ဖတ်စေချင်တယ် ။
အ်ိမ်က ညီလေး.ကိုတောင်..စာအုပ်တွေ ကိုင်တာ မြင်ရင်..စိတ်ချမ်းသာနေတာ..လေ ။
ဘာပဲပြောပြော..။ ဒီပို့ စ်လေးမှာ. ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး..ပေးကြလို့ ..ကျေးဇူးပါ ။
ကိုယ့်အမြင် သူ့ အမြင်.. တွေ ကို ဝေဖန်ဆွေးနွေးပေးကြလို့ကျွန်တော် မသိသေးတာတွေ လည်း..သိလိုက်ရပါတယ် ။
အဲဒါ…. တကယ်ကိုဖြစ်သင့်တဲ့အရာပါ…… ဒါပေးမယ့် အခုခေတ် လူငယ် က အစ လူကြီး အဆုံး
စာဖတ်တာက ၁၀% game ကစားတာက ၁၉၀% လောက် ၇ှိတယ်……….. ဒါပေးမယ့်
လူငယ်လူကြီးတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော် si tone က သေသေချာချာ နားလည် အောင်ပြောပြပါ့မယ်…